Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Tantara Ansu Fati Childhood momba ny Untold Biography Facts
LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Genius Football izay fantatra indrindra amin'ny anarana hoe "Fati". Ny tantaranay Ansu Fati Childhood Story Plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ansu Fati Tantara momba ny fahazazana- Ny famakafakana mandritry ny daty. Ny trosa AS ary UEFA.
Ny famakafakana dia misy ny fiainany voalohany, ny fiainam-pianakaviana, ny fanabeazana / fananganana asa, ny fiainam-piandohana, ny lalana mankany amin'ny tantaran'ny laza, ny fitomboan-tantara, ny fifandraisan'ny tena, ny fiainam-piainana, ny fiainam-pianakaviana sns.
Eny, ny rehetra dia mahita an'i Fati ho zavatra lehibe iray lehibe amin'ny baolina kitra eran-tany. Na izany aza, vitsy ny mihevitra ny biolojia Ansu Fati izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Anssumane Ansu Fati dia teraka tamin'ny andro faha-31 tamin'ny Oktobra 2002 tamin'ny rainy, Boji Fati (mpamily taloha) ary reniny, Lurdes Fati (mpivarotra trano) any Bissau, renivohitr'i Guinea-Bissau, Afrika Andrefana. Tonga teto amin'izao tontolo izao i Ansu tamin'ny maha zanaka lahimatoa sy zanany tamin'ny 5 zanaka nateraky ny ray aman-dreniny mahafinaritra izay sary eto ambany.
Ansu Fati raiamandreny-ny Rainy- Boji Fati sy i Neny- Lurdes Fati. Ny trosa CelebritiesBuzz
Efatra taona talohan'ny nahaterahan'i Ansu Fati dia nisy ady an-trano nipoaka tany amin'ny firenena niaviany. Narahin'ny fanonganan-tena nataon'ny miaramila tamin'ny 2003, herintaona taorian'ny nahaterahany. Nandao ny fireneny ilay fanonganam-panjakana ary nitombo ihany koa ny fahantrana. Ny ray aman-drenin'i Ansu Fati dia natahotra ny ho avin'ny zanany ka io no nahatonga an'i Bori dadany nandao an'i Guinea-Bissau hitady ny ahitra any ivelany.
Nifindra voalohany tany Portugal i Bori izay tsy nahomby tamin'ny fanandramana hanomboka asa baolina kitra tamin'ny liona ambany. Fony tany Portugal, nandre ny tsaho fa Marinaleda, kaominina iray any Espaina dia nanolotra asa ho an'ny mpifindra monina. Nandao haingana an'i Portugal ho any Espana ny dadan'i Ansu mba hahita ny asa.
Mampalahelo fa nandositra azy tany Espaina ny vintana rehefa nanomboka nangataka sakafo teny an-dalamben'i Marinaleda i Bori. Volana vitsivitsy izay dia tsy ela akory izay vao tonga ny fotoana nifankahitan'i Bori Fati tamin'ny Ben'ny tanàna Marinaleda tany Seville, izay nanolotra asa ho mpamily azy.
Ansu Fati dia mpamily iray tao amin'ny Ben'ny tanànan'i Marinaleda. Ny trosa FB
Taorian'ny nanasongadinana ny lehibeny tamin'ny fanetren-tena sy ny asa mafy nataony, dia nanapa-kevitra ny hanampy an'i Bori i Boris hitondra ny vady aman-janany (anisan'izany i Ansu) avy any Guinea-Bissau mankany Espana. Nifindra tany Espaina i Ansu Fati, ny reniny, ireo rahalahiny (Braima sy Miguel) ary ny rahavaviny (Fati Djucu) tamin'izy enin-taona.
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Fanabeazana sy fanabeazana
Fantatrao ve?… Ny dadan'ny Ansu Fati dia mpilalao baolina kitra taloha nandritra ny androny tany Guinea Bissau. Ianao dia mila misotro ronono aloha amin'ny asa karama ambany karamany mba hitadiavana fotoana tsara kokoa any Portugal izay tsy nahombiazany ihany koa, nanery ny fisotroan-dronono. Sarotra tamin'i Bori ny niatrika fisotroan-dronono tamin'ny niorenany tany Espaina. Nanapa-kevitra ny hanome torohevitra ireo zanany lahy izy anisan'izany i Ansu amin'ny fanaovana baolina kitra.
Ny taona 2009 dia taona iray mahafinaritra ho an'ny baolina kitra espaniola araka ny nahazoan'i Real Madrid C Ronaldo. Ansu Fati izay sary eto ambany tamin'izany fotoana izany dia mpankafy Real Madrid izay manaraka ny ampahany amin'ny asan'ny klioba ka ao ny manompo sampy.
Ansu Fati- Fianarana sy fananganana karama.
Fony mbola teo am-pandalinany ny lalao izy dia lavitra an'i Braima zokiny lahy. Ny fahombiazan'ny fanatanjahantena fianakavian'izy ireo dia avy amin'ny zokiny Ansu, Braima Fati, nandalo fitsapana ary nosoniavin'ny Sevilla FC. Tamin'ny alàlan'ny ohatra, ny fitiavan'ny Ansu dia nahitana azy niatrika fitsarana niaraka tamin'i Sevilla sy ireo klioba hafa teo akaiky teo. Raha nihamafy ny valin'ny Sevilla FC dia noraisin'ny klioba iray teo an-toerana antsoina hoe Herrera izy.
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Nanokana vanim-potoana niaraka tamin'i Herrera i Ansu Fati talohan'ny nahazoany ny tenany avy amin'ny Sevilla FC. Satria tsara izy, samy mpikatroka tao amin'ny Akademia Real Madrid sy FC Barcelona nanenjika ny sonia nataony. Amin'ny teniny;
“Tao amin'ny Sevilla aho rehefa tonga i Real Madrid, izay nanome toe-javatra tsara kokoa noho i Barcelona. Tonga tao an-tranon'ny fianakaviako ireo fikambanana roa ireo mba handresy lahatra ny ray aman-dreniko. Nahatezitra an'i Sevilla ity fampivoarana ity satria tian'izy ireo hijanona aho, rehefa nanampy ny rahalahiko ”
Noho ny fifindran'ny famoizana ny fahaverezan'ny zanany kintana dia nandao an'i Ansu i Sevilla nefa tsy nilalao baolina nandritra ny herintaona. Tsy namorona ny faniriany ho tonga pro izany. Ho setriny, ny akademia FC Barca- Le Masia dia tsy maintsy nanao hetsika haka ilay zaza tampoka. Nalain'izy ireo i Ansu Fati, sivy taona, ary nomeny azy ny fototra ilaina hanombohana ny asany.
Ansu Fati Early Life with Lemasia. Ny trosa CelebritiesBuzz
Vetivety dia naneho fahatsapana niaraka tamin'ny Akademia fanta-daza ao La Masia i Ansu Fati. Fantatrao ve?… Izy dia niara-nisalahy niaraka taminy Takefusa Kobo AKA The Japoney Messi alohan'ny Nisaraka azy ireo ny fiainana rehefa niditra tao amin'ny Real Madrid i Kobo. Samy zaza (sary ambany etsy ambany) izay mpinamana indrindra no mpanaja ambony ihany koa tao amin'ny akademia imbetsaka. Tsy hainy firy akory fa ho lasa mpifaninana izy ireo alohan'ny tsingerintaona nahaterahany 20.
Ansu Fati sy Takefusa Kubo dia nanao lohateny lehibe nandritra ny androny tany La Masia. Ny trosa Trome
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Road to Fame Story
Ansu Fati dia nanomboka nanao ny heviny niaraka tamin'i La Masia na dia talohan'ny naha-zatovo azy. Fantatrao ve?… Vetivety izy dia nanangana ny laharana ho lasa kapitenin'ny dingana.
Porofo fa Kapiteny La Masia taloha i Ansu Fati. Ny trosa amin'ny IG
Tamin'izay fotoana izay dia nanaporofo ny maha-kapiteny azy i Ansu, dia nisy ny fotoana farany ambany indrindra tamin'ny asan'ny tanora. Nahazo fahatapahanana tongotra roa mahatsiravina izy. Ity tranga mampalahelo ity dia nitranga tamin'ny Desambra 2015 rehefa nisy fifanenjanana mafy avy amin'ny mpiaro Espaniala nandao an'i Ansu Fati niaraka tamin'ny tibia sy fibra torotoro teo amin'ny tongony ankavanana. Izany dia nanery azy ho fe-potoana folo volana teo amin'ny sisin-dàlana ary be fotoana amin'ny hopitaly. Ity ambany ity dia manao ny anjara toeran'ny anadahiny i Braima raha mijanona eo akaikin'ny ilan'ny zandriny mandritra ny fotoany efa sitrana izy.
Ansu Fati dia nokarakarain'ny rahalahiny nandritra ny sitrana. Ny trosa amin'ny IG
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Mitsangàna amin'ny tantara
Ny ankamaroan'ireo mpankafy mahalala an'i Ansu Fati dia hanaiky fa ny ratra amin'ny tongony no mety ho fiovana eo amin'ny asany. Raha mbola teo am-pandriana izy dia nitombo ihany ny fahatapahan-kevitran'i Ansu Fati ary dia niverina nifanaraka tamin'ny teboka iray izy mba hanaporofoana izanyather noho ny fianjera. Niaritra ny fiakaran'ny meteoric izy io tato anatin'ny volana vitsivitsy, mba ho lasa iray amin'ny fananana mafana indrindra ao amin'ny Akademia FC Barcelona.
Ny meteoric Ansu Fati dia miakatra amin'ny fanta-daza aorian'ny faharatrana amin'ny ratra. Ny trosa amin'ny IG.
Nanjaka tamin'ny baolina kitra tanora i Ansu Fati ary nanohy nanao izany taorian'ny fahasitranany. Tamin'ny 24 Jolay 2019, nanao sonia ny fifanarahana matihanina voalohany niaraka tamin'ny ekipan'ny zokiolona ao amin'ny FC Barcelona izy, ary nifanekena tamin'ny fifanekena hatramin'ny 2022. Amin'izao fotoana izao, raha vao avy nifandray tamin'ny vaovao izy, dia samy nanjary nanahy ny amin'ny filohany ny olona rehetra ao an-tranony.
NY FIANGARANA: Raha mbola nandeha ny fiandrasana, Ansu Fati izay 16 taona tamin'io fotoana io dia nisy famerana teo ambany fifehezan'ny Espaniola tsy hilalao baolina raha vao 9 hariva. Ny fitsipika ao Espana dia mitaky ny klioba tsy afaka hilalao mpilalao ambanin'ny fotoana mandritra ny fiomanana amin'ny alina raha tsy mahazo ny fanekena alohan'ny ray aman-dreniny.
miaraka Ousmane Dembele ary Luis Suarez naratra mafy, mpiandraikitra an'i Barca Ernesto Valverde nanapa-kevitra ny hanome tifitra Ansu Fati. Soa ihany fa ilay zazalahy avy any Guinea Bissau dia nanaiky ny handao azy ny ray aman-dreniny handao ny tranony mba hisian'ny loza sy hahatanteraka ny nofiny.
Ansu Fati dia vao 16 taona ary 298 andro tamin'ny fotoana nahazoany minitra voalohany tao anatin'ny fehikibo. Ity fifaninanana ity dia nahazo ny loka ho lasa mpilalao tanora indrindra hisolo tena ny klioba hatramin'ny 1941 taorian'ny Vicenc Martinez (16 taona ary andro 280). Ansu izay sary an-tsary eto ambany dia nandresy ny firaketana ho lasa zokiny LaLiga zandrin'i FC.
Ansu Fati dia nandresy ny firaketana ho lasa zokiny indrindra amin'ny LaLiga zandrin'i Barca. Ny trosa SL
Fantatrao ve?… Ny bika aman'endriny sy ny tanjon'i Ansu dia nahazo famonjena avy amin'ny vahoaka, anisan'izany i Thiago, zanak 'i Lionel Messi izay nijery azy avy teo amin'ny fitoerana masina. Tsy misy fisalasalana, Ansu dia nanaporofo an'izao tontolo izao fa izy no fampanantenana mahafinaritra fatratra amin'ny fidiran'ny afrikanina amin'ny hery mahavoa nataon'ny club taorian'ny Samuel Etoo. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Relationship Life
Rehefa nalaza ny lazany dia azo antoka fa ny ankamaroan'ny mpankafy dia nanontany momba ny hoe iza ny sipa Ansu Fati. Tsy azo lavina ny zava-misy fa ny tarehin'ilay zanany, ny endrika tsara tarehy miaraka amin'ny fomba fanolorany dia tsy hahatonga azy ho voaloboka maharikoriko ho an'ny vehivavy.
Iza ny sakaizan'i Ansu Fati? Ny trosa amin'ny IG
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, nifototra tamin'ny fampahalalana momba ny haino aman-jery sosialy azy dia toa i Ansu Fati dia naniry ny hifantoka amin'ny asany. Tsy misy ny fampahalalana manambara izay tsy hisongadina ny fiainany manokana. Ity zava-misy ity dia manasarotra ny haino aman-jery ny manangona info momba ny fiainam-pitiavany sy ny tantarany ankehitriny.
Na izany aza, noho ny fahatanorany sy ny zava-misy fa i FC Barcelona dia tsy azo avela heloka amin'ny tanora tsy mahay manao izany, azo atao fa mety tsy hifanambady olona i Ansu Fati, fa kosa mifantoka amin'ny fanaovana an'io goavambe io. Fa iza no mahalala? !!… Be dia be ny tanora amin'ny taonany izay mbola manana sipa. Ka zah, mbola azontsika atao ihany fa manana sipa izy nefa aleony tsy hampahafantatra izany imasom-bahoaka.
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny fiainany manokana Ansu Fati dia hanampy anao hahazo sary feno aminy.
Raha vao manomboka dia haingana sy marani-tsaina, manam-pikarohana mandra-pahitany ny fomba mampiavaka azy manokana amin'ny fiheverana be loatra. Ary i Ansu Fati dia olona mora ampifanaraka amin'ny angovo (tsara sy mahomby) izay manodidina azy. Farany, izy ihany no misaintsaina lalina, izay aleon'izy ireo indraindray te hisolo tena sy manalavitra ny zava-drehetra, mba hamerenany ny tanjany.
Ansu Fati Fiainana Manokana-Fahafantarana ny toetrany. Ny trosa amin'ny IG
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Tsy mila teraka miaraka amin'ny sotro volafotsy ao am-bavanao ianao mba hahatratrarana zavatra lehibe amin'ny fiainana. Ireo teny ireo dia mitondra lanja lehibe ho an'i Ansu Fati sy ny fianakaviany tsirairay izay naseho etsy ambany.
Mpikambana ao amin'ny fianakaviana Ansu Fati. Ny trosa amin'ny IG
Ny rain'i Ansu Fati dia i Bori indray dia nitebiteby rehefa niresaka momba ny lalao fifaninanana voalohany nataony ho an'ny zanany any Barcelona. Hoy ny teniny: “Afaka maty aho androany! Tanteraka izao ny fiainako ankehitriny na dia tonga ny fahafatesana. ”Hoy i Bori tamin'ny radio iray teo an-toerana taorian'ny nahita ny zanany lahy nanatontosa azy. Izy dia manodidina ny haino aman-jery tsy mitovy amin'ny vadiny (renin'i Ansu Fati) izay mitazona mombamomba kely.
Momba ireo Anadahy Ansu Fati: Ireo rehetra nataon'i Ansu Fati rahalahy izay; Braima (zokiny) ary i Miguel (zandriny akaiky) ary i Miguel (faralahy) dia mpilalao baolina ihany koa, tsy mahomby tahaka an'i Ansu ianao.
Fantatrao ve?… Ny zandriny indrindra amin'ny rahalahin'i Ansu Fati (Miguel) dia namana akaiky sy mpiara-miasa aminy Thiago Messi (Zanakalahin'i Lionel Messi). Samy toy ny tamin'ny fotoana nanoratana dia nanatrika ny akademian'ny FC Barca- La Masia. Raha tsaraina amin'ny vanim-potoana sy ny fotoana nifindran'ny fianakavian'i Fati tany Espaina, azo antoka fa teraka tany Espana i Miguel tsara tarehy (sary etsy ambany).
Hihaona amin'ny rahalahin'i Miguel Fati- Ansu
Asides Braima (zokin'i Ansu), ny iray amin'ireo rahalahiny dia milalao ho an'ny Akademia fanta-daza ao FC, La Masia. Ny rahalahin'i Braima, izay be fitiavana, dia manindrona any Calahora toy ny tamin'ny fotoana nanoratana.
Ansu Fati Brother- Miguel Fati. Ny trosa amin'ny IG
Momba ny rahavavin'i Ansu Fati: Djucu dia anabavin'i Ansu Fati tsara tarehy. Afaka herintaona roa taona noho ny Ansu rahalahiny izy. Araka ny kaontiny Instagram, nankalaza ny tsingerin-taona nahaterahany i Djucu tamin'ny Janoary Janoary 20th.
Hihaona Ansu Fatis Rahavavy- Djucu Fati. Saram-bola amin'ny kaonty IG azy
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Lifestyle
Ho an'i Fati dia misy tokoa ny tsy fitoviana mazava eo amin'ny filalaovana baolina sy ny fahafinaretana. Rehefa tapitra ny vanim-potoanan'ny baolina kitra dia tia ny mankafy ny tenany any Ibiza sy ireo toerana tsara tarehy hafa any Espana i Ansu Fati. Matetika izy no mahita fa sendra mandeha lakana amin'ny lakana sy lakana.
Ansu Fati- tia ny ranomasina Espaniola sy Countrysides. Ny trosa amin'ny IG
Ansu dia manafay tsara hifikitra amin'ny tetibola. Ohatra, izy dia mifikitra amin'ny fiara mahazatra sy ny bisikileta tsy mandeha amin'ny herinaratra. Tsy matahotra ny amin'ny asa mafy mitondra ny tenany sy ny fianakaviany amin'ny toerana ara-bola tsara kokoa izy.
Ansu Fati Car sy Ride- LifeStyle Facts. Ny trosa amin'ny IG
Tantara Ansu Fati Childhood momba ny zava-misy momba ny Biography Untold - Zavatra tsy fantatra
Namana Cool miaraka amin'i Lionel Messi: Ny alina mahagaga mahagaga an'i Ansu Fati izay nahavitany ny tanjony La Liga voalohany dia nihatsara kokoa taorian'ny sidina famaranana. Fantatrao ve? ... Taorian'ilay lalao dia nahazo famihina mafana tao amin'ny tonelina i chapel Messi. Ilay mpilalao mpilalao an-tsary isan-karazany no nizara ilay sary (ambany) tao amin'ny kaontiny Instagram izay nahazo mihoatra ny 6.3 tapitrisa izay tia tamin'ny fotoana nanoratana.
Mpinamana i Ansu Fati sy Lionel Messi
Fantatrao ve?… Ny fifamatoran'i Ansu Fati amin'i Messi dia vokatry ny fifandraisana nifampiraharahana teo amin'ny zandriny lahy sy ny zanany lahy superstar Thiago Messi.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Ansu Fati Childhood ary Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Ny tantaram-piainan'i Iago Aspas momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Ny tantaram-piraisan'i Fernando Llorente momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny tantaran'i Diego Costa Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana